Ethiopian Church reconciliation in Melbourne
A formal and public reconciliation has taken place among the five Ethiopian Orthodox Churches in Melbourne at a ceremony held on 29 September 2018.
Emperor's grandson in Melbourne
His Imperial Highness Prince Ermias Sahle-Selassie of Ethiopia has met with members of the Ethiopian community in Melbourne while on a visit to Australia.
Mahmoud and Ali held a beautiful concert in Melbourne
Mahmoud Ahmed, 75, and Ali Birra, 69, performed beautifully before thousands of their admirers.
A Melbourne-made Ethiopian movie on the big screen
A movie by a local Ethiopian filmmaker Moges Wosen has made it to the big screen at Village Cinemas in Sunshine
Become a volunteer in your own community
Volunteering is a wonderful thing you can do for your community and a rewarding experience for yourself.
Find Mosques that Ethiopians go to in Melbourne
Find Ethiopians Evangelical Churches in Melbourne
Find Ethiopian Orthodox Churches in Melbourne
→ Voting in elections
→ Jury service
→ Political system
Online support for Ethiopians
An Ethiopian online community is up and running with its main focus being to help grow a network of strongly connected Ethiopians in Victoria.
The newly launched Ethiopian online community that has its base on this very website is founded by a group of Ethiopians in who wanted to contribute to the formation of a dynamic Ethiopian community that utilises the Internet and digital technologies to better connect, collaborate and solve longstanding community problems.
Various local Ethiopian artists shine on a stage in Footscray
Legendary Ethiopian artists Mahmoud Ahmed and Ali Birra to sing in Melbourne